မင်းရဲ့ပွဲတော်ရွေးချယ်မှုက မင်းအကြောင်း ဘာပြောလဲ။ - တခြား
မင်းရဲ့ပွဲတော်ရွေးချယ်မှုက မင်းအကြောင်း ဘာပြောလဲ။
အဓိက / တခြား
ပွဲတော်စီစဉ်သည့်ရာသီဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Tents တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပြီး မိုက်မဲသော WhatsApp အဖွဲ့ကို စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် သင်ရရှိသည့်ဂရမ်မည်မျှနှင့် ၎င်းတို့ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ခိုးသွင်းရမည်ကို ဆွေးနွေးနေပါသည်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ပွဲတော်က မင်းအကြောင်း ဘာပြောလဲ။
သင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အကြိုက်ဆုံးပွဲတော်ကို သစ္စာရှိရှိစွဲကိုင်ကာ Glasto သည် ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထိုက်တန်သည့်နည်းလမ်းမရှိကြောင်း သင်နှင့်စကားပြောခဲ့သောမည်သူ့ကိုမဆို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖောင်းပွမှုအား လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ထိုရွှံ့များကို ကြည့်ပါ၊ များစွာ ပျော်စရာကောင်းမည့် နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလစ်နဲ့ သူ့အဖော်တွေက မနှစ်က ထွက်သွားပြီး သူတို့ ဒီကိစ္စကို ပါးစပ်ပိတ်ထားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီမှာ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွေကို အောက်တိုဘာလရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၈ နာရီ ၅၉ မိနစ်မှာ အရူးအမူး ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ ပွဲတော်မစမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း သင်ပိုမိုစိတ်ဖိစီးလာလိမ့်မည်- ဘာဝတ်ရမည်၊ ဘာဆေးသောက်ရန်၊ နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန် အဆင့် 200 ကျော်ရှိသောအခါတွင် သင်မည်သူကိုကြည့်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
မင်းအဲဒီကိုရောက်တာနဲ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ စီစဉ်ရတာက မဖြစ်နိုင်တာတောင်မှ ဆက်ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ သင်ပျောက်ဆုံးနေသည့်အရာများကို သတိမမူမိဘဲ EE ဖုန်းအားသွင်းတဲတွင် နေ့စဉ်သုံးပုံတစ်ပုံကို သုံးစွဲပါမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စနေနေ့ည2နာရီမှာ မင်းက အရမ်းကြိုးစားတာကို ရပ်လိုက်ပြီး ပွဲတော်ကို မင်းအတွက်ပဲ ထားလိုက်ပါ။ ထို့နောက် သင်သည် ရှန်ဂရီလာအနီးတွင် ထိမိ၍လဲနေသောသူဖြစ်ပြီး သင်၏ဝိညာဉ်ရေးနိုးကြားလာမှုအကြောင်း သူစိမ်းများနှင့် စကားပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ၏အစမှ၊ သင်စဉ်းစားနိုင်သမျှမှာနောက်ထပ် Glastonbury အထိစောင့်ပါ။ ပြင်ပကမ္ဘာသည် Glastonbury ကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် မဖြစ်နိုင်သနည်း။ သင်သည် လအနည်းငယ်ကြာတိုင်း သင်၏ Glasto WhatsApp ချည်နှောင်မှုတွင် ရီမစ်အသစ် သို့မဟုတ် သင်ကနေသည့်ပုံတစ်ပုံကိုသာ လင့်ခ်တစ်ခုဖြင့် လအနည်းငယ်ကြာတိုင်း ပို့စ်အောက်တွင် ရေးပါ။ နိုဝင်္ဘာလမို့ပါ။ လိုင်းအပ်ခြင်းကို ကြေညာပြီးနောက် သင်သည် ပူးတွဲပါ Spotify အစီအစဉ်ဖြင့် သင့်အဖွဲ့အား မြင်သင့်သော ရောင်စုံကုဒ်ဖြင့် အချိန်ဇယားကို ပေးပို့သူဖြစ်သည်။ Corbyn သည် သင့်အား နိုင်ငံရေးအရ အမှန်တကယ် စိတ်အားထက်သန်စေသည်ဟု Leftfield တွင် ယခုတစ်ကြိမ် နိုင်ငံရေးအခြေအတင်များထဲမှ သင်အမှန်တကယ်သွားမည့် သူငယ်ချင်းများကို သင် ဆက်ပြောနေပါသည်။
facebook မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း
အဲဒီ့ကို ရောက်ပြီး ပထမညမှာ လမ်းတစ်ဝက်မှာ စနေ၊ ခြောက်နာရီအကြာတွင် သင်သည် သင်၏တဲ၌ လွန်သွားခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့အထိ မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခြင်း မပြုပါ။
သင်သည် Glastonbury သို့သွားပါသေးသည်။ သင်နားထောင်တဲ့သီချင်းတစ်ဝက်လောက်က မင်းရဲ့ DJ တတ်ကျွမ်းတဲ့အိမ်ဖော်က အချိုရည်ကြိုမှာတီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်ကတော့ Icona Pop ကသေချာပါတယ်။ သင်သည် Four Tet နှင့် Jackmaster ၏ b2b အတွဲကို စောင့်မျှော်နေဟန်ဆောင်သော်လည်း၊ သင်သည် နောက်ဆုံးပေါ် 80s ပေါ့ပ်ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်းကို အဓိကဇာတ်စင်တွင် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော နောက်ဆုံးပေါ် 80s ပေါ့ပ်ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းကို ကြည့်ရှုသင့်သည်ဟု ဟာသများအတွက် အကြံပြုသည့်အခါတိုင်း၊ သင်သည် အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်။ သင် တောက်ပမှုများစွာကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
သင်သည် Bestival စခန်းသွင်းလက်မှတ်ကို ဝယ်နေသည်ဟု သင်ထင်ခဲ့ပြီး ယခု သင်သည် လက်တွန်းလှည်းပေါ်တွင် တွယ်ကပ်နေသော ငယ်ရွယ်သောမိဘများ ဝန်းရံထားပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့လုပ်နိုင်ဆဲ ဟန်ဆောင်မှုဖြင့် ဝန်းရံနေပါသည်။
Hyde Park ရှိ ဗြိတိသျှ နွေရာသီအချိန်
သင်သည် ဂီတအယူအဆကို နှစ်သက်သကဲ့သို့ ပွဲတော်များဆိုင်ရာ အယူအဆကို သင်နှစ်သက်သည်- အဝေးက အကောင်းဆုံး ခံစားနိုင်သည် ။ Mumfordx သံပြိုင်၏ မရေမတွက်နိုင်သော လွင်ပြင်များဆီသို့ လေထဲတွင် လက်ဝှေ့ယမ်းကာ စင်မြင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ ပလတ်စတစ်သစ်ပင်အတုများကဲ့သို့ အစစ်အမှန်ကို ခံစားသိရှိနိုင်သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဘာကြောင့်ရှာတွေ့နိုင်သနည်း။ ည ၁၁ နာရီမှ အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်သည်က ပိုကောင်းသည်။
မင်းက လှတယ် သိလား။
ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ရင်ဆိုင်ပါ- မင်းက နည်းနည်းတော့ ချာတိတ်လေး။ သင်သည် စနေ၊
V Festival နဲ့တူပေမယ့် Ibiza ကိုရောက်ဖူးသူတွေအတွက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသောရက်မတိုင်မီ facebook ပို့စ်များအားလုံးကို ဖျက်ပါ။
သင် angsty metal ကိုနှစ်သက်သလောက်၊ မျက်နှာဖုံးများနှင့် emo ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၏ အထွတ်အထိပ်တွင် တီးခတ်နေသော တီးဝိုင်းများသည် သင့်အတွင်းစိတ် 10 နှစ်သားအရွယ်နှင့် လုံလောက်စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ABBA ဂုဏ်ပြုအဖွဲ့တစ်ခု လျှို့ဝှက်ပြုလုပ်ရန် ပေါ်လာသည့်အခါ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ . ဟုတ်တယ်၊ မင်းက Bullet For My Valentine ကိုကြိုက်ပြီး တွင်းထဲကိုဝင်ဖို့ စနေ၊ ပြီးနောက်၊ ပုံမှန် Goth သည် ၎င်းတို့၏ စနေ၊ အတိအကျ။
Beni သည် Magaluf antics နှင့် V Festival line-up ၏ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့၊ သင်သည် Essex မှဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့တဲအစစ်ကို အရည်ပျော်သွားစေလောက်အောင် ပူနေမယ်လို့ ကတိပေးတဲ့အတွက် မင်းယူနေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောအဝတ်အစားတွေက အင်္ကျီလက်ပြတ်တွေ၊ ဘလက်တိုနဲ့ ဘောင်းဘီတိုတွေပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မင်းရဲ့ပထမဆုံးပွဲတော်ဖြစ်လို့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် တနင်္ဂနွေတစ်ရက်လုံး ဆေးလိပ်သောက်မယ့်အစား အဆင်သင့်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
V Festival အတွက် အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်၊ Bestival အတွက် အဓိက ရေပန်းစားလွန်းတယ်။
သင့်အား ပိုစတာဖြင့်ရေးဆွဲထားသည် - အကပွဲကြီးများနှင့် DJ များအကြောင်း လုံလောက်စွာရင်းနှီးသူဖြစ်သည် - သို့သော် Sonar သို့မဟုတ် ခရိုအေးရှားပွဲတော်အတွက် လက်မှတ်တစ်ခုကြိုတင်မှာယူထားရလောက်အောင် သင်မအေးပါ။ မင်းမှာ အဖော်အုပ်စုကြီးတစ်ခု ရှိပြီး မင်းတစ်နေကုန် အုပ်စုလိုက် လမ်းလျှောက်နေရတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကို တန်းစီစောင့်ဆိုင်းကာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ငြင်းခုံခြင်းနှင့် နေလောင်ဒဏ်ခံရခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ည၏အဆုံးတွင်၊ သင်သည် pingers များကိုတရားမျှတစေရန်အတွက် လုံလောက်သောပျော်ရွှင်မှုရခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်ပွဲတော်တစ်ခုသို့ သင်သွားချင်စေရန် မလုံလောက်ပါ။
သင်သည် 16 နှစ်အောက်ဖြစ်သည်။
သင်သည် 16 နှစ်အောက်နှင့် မြောက်ပိုင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်လို 365 ရက်စာအုပ်စီးရီး
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာခြင်း၊ Snow Patrol ၏အသွင်အပြင်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်များရှိသည့် စကော့တလန်ရှိ ပွဲတော်တစ်ခုသို့ သွားလိုပါသလား။ ထို့နောက် သင်သည် စကော့တလန်လူမျိုးဖြစ်ရမည်။
Kanye သည် Brits များထံ မလှုပ်မီတွင် သင်သည် ညစ်ညမ်းသောစကားများကို နားထောင်နေခဲ့ပြီး၊ Hotline Bling မတိုင်မီ Drake လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီး Kendrick Lamar ကို ၎င်း၏အမည်ဖြင့်သာ ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အချိုရည်အကြိုမှာ ရောစပ်တိပ်အသစ်တချို့ကို သင်အမြဲတမ်း တွန်းထုတ်နေရတာကို တခြားလူတိုင်း ငြီးငွေ့နေကြပေမယ့် ဒါဟာ မင်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ Brooklyn နှင့် သင့်ဘဝကို ပျက်စီးစေမည့်အစား သင့်အား Surrey တွင် မွေးရန် ပါးပြင်ရှိခြင်းအတွက် သင့်မိဘများကို အပြစ်တင်ပါ။
ပွဲတော်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာမှာ တောအုပ်အလယ်တွင် အစားအစာကော့တေးများ မပါဝင်ရခြင်းမှာ Django Django ၏ လျှို့ဝှက် acoustic ဖျော်ဖြေမှုကို ကြည့်ရှုနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြေခွေး tango ကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်ထားစဉ်၊ ကျွန်တော် လိုချင်တာက အဲဒါကို ပေးဆောင်တဲ့ နေရာနဲ့ တိုက်ရိုက် ကဗျာဖတ်ခြင်း တစ်ချို့ပါ။ မေးစရာတွေများလို့လား?
နာတာလီမဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး။